पशुपति आर्यघाटमा बढ्यो शवदाह शुल्क – Samacharpati
आइतबार, माघ ५, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मघरसम्म पुग्दैछ बाटो
फुटबल प्रतियोगितामा एनआरटीद्वारा विभागीय टोली एपिएफ पराजित
अन्तःशुल्क घटेपछि लक्ष्यअनुसार कर उठेन
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा कोदो झार्दै महिला
कालीमाटी दुर्घटनामा निधन भएका प्रहरीप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा दुःख व्यक्त
पशुपति आर्यघाटमा बढ्यो शवदाह शुल्क
काठमाडौं, ६ कात्तिक । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्यघाटमा शव अन्त्येष्टि गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएको छ । घाट सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउने सहमति गरेकै दिनदेखि कोषले शव अन्त्येष्टिको शुल्क पनि बढाएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले नौ वर्षदेखि नबढेको शुल्क बुधबारबाट बढाइएको बताएका छन् ।
ढकालका अनुसार शव दाह गरेको शुल्कमा ३ सय रुपैयाँ बढेको छ । पहिले १२ सय रहेको शवदाह शुल्क अब १५ सय पुगेको छ ।यसैगरी दाउरा बोक्ने र शव बोक्ने शुल्कमा समान २–२ सय रुपैयाँ बढेको छ । यसअघि यो शीर्षकमा चार–चार सय शुल्क लाग्थ्यो । चपरी बोक्ने शुल्क ३ सयबाट बढेर ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । शवलाई गाड्नका लागि खाल्डो खन्ने शुल्क पनि १२ सयबाट बढेर १५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । दशनामीहरुले शव नजलाएर गाड्ने गर्दछन् ।
पशुपति आर्यघाटमा दैनिक झण्डै एक सय वटा शव जल्ने गर्दछन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. ढकालले कर्मचारीको आन्दोलनबाट शवदाहमा केही समस्या आए पनि ठप्प भने नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीसँग विद्युतीय शवदाह गृह पनि छ । त्यसबाट पनि काम हुन्छ ।’ हाल विद्युतीय गृहमा शवदाहका लागि दुई वटा मेसिन छन् । दुवै मेसिनको दैनिक २२ वटासम्म शव दाह गर्ने क्षमता छ ।
घाट सेवाकेन्द्रमा शव जलाउने कार्यमा ४९ कर्मचारी छन् । उनीहरुले एक जलाएबापत १ हजार ६० रुपैयाँ पाउँछन् । यो शुल्क कम भएकाले त्यसलाई बढाएर १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई १ लाख ५० हजार उपदानसहित बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । तर आन्दोलनरत कर्मचारीहरू यसको विरोधमा छन् । काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई काम गर्न दिइरहने र उपदान १० लाख बनाउनु पर्ने माग उनीहरुकाे रहेको छ ।
‘मेगा मोडल–२०१९’मा जोडिए आईएफटी स्कुल अफ फेसन र होटल आकामा